Myanmar Medical Books | Weenyinthit Bookshelf
ကျန်းမာရေးစာအုပ်လေးတွေနည်းနေလို့ ရှာဖွေပြီးထပ်ဖြည့်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကျန်းမာရေး စာအုပ်စာရင်းထဲမှာ မရှိသော စာအုပ်များရှိခဲ့ရင်လည်း ပို့ပေးစေလို့ပါတယ်။
Read Online ဒေါက်တာ ဦးတင့်ဆွေလတ် ဆီးချိုသွေးချို ရောဂါအကြောင်း
Read Online ပါမောက္ခမင်းဓာတု ရင်သားကင်ဆာ
ဒေါက်တာသီဟ HIV မှတ်စုများ 2004
ဒေါက်တာမောင်မောင်ညို ထူးဆန်းထွေလာ စားစရာနှင့် အာဟာရဗေဒ
ဒေါက်တာနန်းဥမ္မာ – က္ကထ္တိယနဲ့ ဆေးပညာ
ဒေါက်တာအောင်ခင်ဆင့် – ဖိုနဲ့မဆက်ဆံရေး
ဒေါက်တာနိုက်တင်ဂေလ်း – သန္ဒေကာတာ
နေ၀င်း(လန်ဒန်) – မြန်မာ့ဆေးမြီးတိုများ
ဒေါက်တာလှဖေ – စိတ်ဝင်စားစရာ သင့်ခန္ဒာ (အမှတ် ၁)
ဒေါက်တာလှဖေ – စိတ်ဝင်စားစရာ သင့်ခန္ဒာ (အမှတ် ၂)
ဇီဝက (ဆေး ၂) – ၂၀၀၉ ခုနှစ် H1N1 နှင့် ရာသီတုတ်ကွေး အိမ်တွင်းပြုစုနည်း
ဒေါက်တာတင်မောင်ထွေး ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်နည်း
သာဂဒိုး – စူလာနဖာနှင့် ဆေးနည်း ဆေးပင်များ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ကျန်းမာရေး (March 07, 2009)
မောင်မောင်ထွန်းအောင်(ကျန်းမာရေး) – ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါအကြော င်း ( March 7, 09)
ပါမောက္ခမင်းဓာတု – ရင်သားကင်ဆာ သိကောင်းစရာများ ( March 08, 2009)
ဒေါက်တာသီဟ – HIV မှတ်စုများ (March 07, 2009)
ဒေါက်တာမောင်မောင်ညို – ထူးဆန်းထွေလာစားစရာနှင့် အာဟာရဗေဒ (March 07, 2009)
ဒေါက်တာနန်းဥမ္မာ – က္ကထ္တိယနဲ့ ဆေးပညာ (Nov 28, 2009)
ဒေါက်တာအောင်ခင်ဆင့် – ဖိုနဲ့မဆက်ဆံရေး ဒေါက်တာနိုက်တင်ဂေလ်း – သန္ဒေကာတာ ( ကိုယ်ဝန်တားခြင်း နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်) (07/08)
နေ၀င်း(လန်ဒန်) – မြန်မာ့ဆေးမြီးတိုများ (March 7, 2009)
သာဂဒိုး – စူလာနဖာနှင့် ဆေးနည်း ဆေးပင်များ (08/24)
ဒေါက်တာလှဖေ – စိတ်ဝင်စားစရာ သင့်ခန္ဒာ (အမှတ် ၂) ဇီဝက (ဆေး ၂) – ၂၀၀၉ ခုနှစ် H1N1 နှင့် ရာသီတုတ်ကွေး အိမ်တွင်းပြုစုနည်း ဒေါက်တာတင်မောင်ထွေး – ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်နည်း Popularity: 47% [?]
15 Responses to “ကျန်းမာရေး စာအုပ်များ”
တင့်ဆွေ says:	May 15, 2009 at 6:15 am	ကျွန်တော့် ဘလော့ခ် မှာ ညွှန်းလိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။
Reply	သက်ပိုင်အောင် says:	February 17, 2010 at 12:43 pm	ကျေးဇူးပါ
Reply	ပပ says:	May 8, 2010 at 11:59 am	စာအုပ်တွေဒေါင်းသွားပါတယ်..ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှင်..
Reply	joejoe says:	December 11, 2010 at 7:20 am	၀ိတ်မနည်းစာအုပ်လေးများး၇ှိ၇င်တင်ပေးကြပါဗျာ ။ဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်ကို ဖတ်လို့ ၇မယ့်လင့်လေးပေးခဲ့ပါလို့ တောင်းဆိုပါ၇စေဗျာ ။ကျွန်တော်၇ှာနေတာဘယ်မှာမှမတွေ့လို့ ပါ။လိပ်စာက drjoejoe.co.mm@gmail.comပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ။
Reply	min says:	October 22, 2011 at 10:57 am	ko joe joe http://www.myanmarfitness.com mhar joe joe lo chin tah sar oak twayamyar kyi par
Reply	Ko Oo says:	November 24, 2011 at 11:37 pm	Access Denied ပဲဖြစ်နေပါတယ်။ ဘယ်လို သွားရမယ်ဆိုတာ လမ်းညွှန်ပါဦး—
Reply	thiha says:	January 20, 2012 at 5:26 am	joe joe ဘာလို့ အပင်ပန်းခံပြီး ၀ိတ်မချင်ရတာလဲ ညီလေးရာ အေးအေးနေစမ်းပါငါ့ညီရာ
စာတွေဖတ်စမ်းပါ အကိုစာအုပ်တွေရှာပေးမယ် မင်းကွာ ဒုက္ခရှာလို့။
Reply	vo vo myintkhaing says:	March 23, 2012 at 2:08 am	ကျန်းမာရေးစာအုပ်တွေ ဗဟုတုသရပါသဖြင့် ဒေါင်းလုတ်လုပ်သွားပါတယ်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး စာအုပ်အသစ်များ ထပ်မံတင်နိုင်ပါစေ။
Reply	မမျိုးမျိုး says:	April 15, 2012 at 6:25 am	စအိုဝတွအဖုထနေလို့2နှစ်လောက်ရှိပြီ။ တစ်ခါတရံအစပ်စားရင်နာလာပါတယ်။ဘာလုပ်ရမလဲဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်
Reply	myominthu says:	April 16, 2012 at 8:32 am	kaung like dar.
Reply	myominthu says:	April 16, 2012 at 8:33 am	နောက်လဲကျန်းမာရေးစာအုပ်တွေ အများကြီးထည်.ပေးကြပါလို. ….တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာ…
Reply	အောင်ပြည့်စုံ says:	May 1, 2012 at 1:16 am	my family needs your help,you has given my familyahelp ,Please
Reply	မင်းမင်း says:	May 28, 2012 at 1:20 am	ဘာမှလုပ်လို့ရဘူး အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်းမှမကောင်းတာ တမ်းပြီးဖတ်လို့ရအောင်လုပ် ပေးပါမပေးရင် လဲနေ
Reply	Theingi says:	February 10, 2013 at 5:24 pm	ကလေးကျန်းမာရေးစာအုပ်လေးတွေနဲ့ ၀ိတ်ချနည်းစာအုပ်လေးတွေတင်ပေးပါ…
Reply	Anoymous says:	April 17, 2013 at 10:07 am	တစ်ခု မေးကြည့်ချင်ပါတယ်.. ကျနော့်မှာ အိမ်သာ တက်ရင် သွေးပါ ကျနေတယ်.. အဲဒါ ဘာကြောင့် လဲ မသိဘူး .. အခြား နေမကောင်းတာ လည်း ဘာမှ မရှိဘူး .. အားလုံးက ပုံမှန်ပါပဲ ဘာကြောင့် ဖြစ်လဲ ဆိုတာ ပြောပေးပါလား .. အဲဒီ သွေးကျတာလည်း ကျချင်တဲ့ အချိန် ကျတာပါ .. တစ်ခါတစ်လေမှပါ..